China Optical Brightener OB-1 Mugadziri uye Mutengesi | BGT
Optical Chiedza OB-1inowedzerwa kuzvinhu zvakawanda kudzikisa yero, kunatsiridza kuchena, uye kusimudzira kupenya kwechigadzirwa. Inoshandiswa zvakanyanya mumusika wepurasitiki. Nekuda kwekugona kwayo kupenya kugona, kutsiga kwakanaka kwekushisa, uye kuenderana nemapolymer mazhinji.
(Mubvunzo: Ruzivo rwezvigadzirwa zvedu ndere referenzi chete. Isu hatisi ivo vane mhedzisiro yemimwe mhedzisiro isingatarisirwe kana gakava repamutemo rakakonzerwa naro.)
Optical Brightener Mumiriri OB iri yakakwirira mamorekuru uremu inopenya inopenya yeiyo thhenophenediyl benzoxazole kirasi, inokodzera iyo yakajeka inopenya yemapolymers panguva yese yekugadzirisa.
Optical Brighteners anoshanda nekutora ultraviolet radiation uye kubvisa bhuruu mwenje. Chiedza chakaburitswa chebhuruu chinoderedza yero yeruvara rwe polymer. Pamberi peye whitening mumiriri, senge TiO2, iko kushandiswa kwe OB-1 ichagadzira chena inopenya kana "chena kupfuura chena" kutaridzika.
Iyo CBS-127 Optical Brightener inoshanda kuma polymers, kunyanya kune PVC uye phenylethylene zvigadzirwa. Inogona kuwedzerwa kuma polymers se pigment. Iyo yakajeka chena ruvara ichauya pane zvigadzirwa kana ichishandiswa yakaderera kusangana kweCBS-127pamwe chete anatase titania. Iko kusangana kweCBS-127 inofanirwa kuwedzera kana iyo rutile anatase titania ichizoshandiswa.
Pashure: Kunhuwa Remover
Zvadaro: Polyester & Nylon Nucleator P-24